कोरोना जितेका युवक पुर्पक्षका लागि कारगार चलान
हुवालियन । ताइवानमा हुवालियन प्रान्तको तटीय क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर आज(बिहिबार) बिहान ६.१ म्याग्नेच्युडको भूकम्प गएको छ। ताइवानका विभिन्न भागमा भूकम्पको धक्का महसुस गरिएपनि हाल सम्म कुनै मानवी...
लिमा । पेरुका पूर्व राष्ट्रपति एलन गार्सियाले गोली हानी आत्महत्या गरेका छन् । घुस लिएको आरोपमा प्रहरी उनकै घरमा पक्रन जाँदै गर्दा उनले आफै माथि गोली चलाएका हुन् । सन् १९८५ देखि १९९० सम्म र सन् २००६ ...
कराकस । राजनीतिक र आर्थिक सङ्कट खेपिरहेको भेनेजुएलाको राजधानी कराकसमा अर्को सङ्कट देखा परेको छ। त्यहाँका चिहानमा लुटपाट हुने क्रम बढेको छ । लग सान्टेरिया नामक धार्मिक समूहको रीतिरिवाजमा मानव हड्डी प्...
तेहरान। इरानी सांसदहरुले मंगलबार मध्यपूर्वको अमेरिकी सेना र सुरक्षा बलहरुलाई 'बिल लेबलिङ'को मामलामा आतंककारीको रूपमा परिभाषित गरेका छन् । रक्षा मंत्री जनरल अमिर हतामीले 'बिल लेबलिङ'लाई आतंककारी कार...
सय पटक भन्दा बढी बालिका बलात्कारको आरोपमा ७१ वर्षीय फाउन्टेन पक्राउ
लुइसियाना । अमेरिकाको लुइसियानाका ७१ वर्षीय एक व्यक्ती १ सय पटकभन्दा बढी बालिकामाथि बलात्कार तथा यौन शोषण गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । कयौँ दशकअघि गरेको कुकृत्यबारे एक पीडितले उजुरी ...
आठ सय ५० वर्ष पुरानो भवन सँगै जलिरह्यो आस्था र शहरको पहिचान
प्यारिस । आठ सय ५० वर्ष पुरानो भवन जलिरहेको थियो र जलिरहेको थियो शहरका मानिसहरुको मनपनि । त्यो भवन कसैको घर थिएन तर आस्थाको केन्द्र थियो र त्यो शहरको पहिचान पनि । पेरिसको चर्चित नोट्र डाम क्याथेड्रलमा...
मस्तुङ जिल्लामा सवारी दुर्घटना, मृतकको संख्या ११ पुग्यो
इस्लामाबाद । पाकिस्तानको दक्षिणपश्चिमी बलुचिस्तान प्रान्त स्थित मस्तुङ जिल्लामा भएको सवारी दुर्घटनामा परी महिला र बालबालिकासहित कम्तीमा ११ जनाको मृत्यु भएको छ । नौ जना घाइते भएका छन् । दुर्घट...
काठमाडौं । प्रयोगशालामा मानवीय अंगहरू बनाउने कार्यमा सम्भावित सफलता मिलेको छ । इजरायलका शोधकर्ताहरूले मांसपेशी र रक्त नलीयुक्त थ्रीडी(3D) हृदय बनाएका छन् । सीबीएस न्युयोर्कको डा. मैक्स गाम्ज को ...
प्यारिस । सोमबार राती ८५० वर्ष पुरानो चर्चित 'नोत्रे दाम कथिड्रल' चर्चमा भीषण आगलागी भएको छ । आगोले चर्चको माथिल्लो भाग खरानी बनाएकाे तथा छाना पूर्ण रुपमा ध्वस्त बनाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम...
चन्द्रमामा पुग्ने इजरायलको पहिलो अभियान किन भयो असफल ?
काठमाडौं । चन्द्रमामा पुग्ने इजरायलको पहिलो अभियान असफल भएको छ। चन्द्रमाको सतहमा अवतरण गर्ने बित्तिकै उसको अन्तरीक्षयान बेरेशिट दुर्घटनाग्रस्त भएको छ । बेरेशिटको इन्धनमा खराबी आएको थियो र अवतरण गर्ने...